IATA: Mareykanka oo dib ugu furaya socotada la tallaalay waa war aad u wanaagsan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » IATA: Mareykanka oo dib ugu furaya socotada la tallaalay waa war aad u wanaagsan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Go'aanka Maamulka Biden ee loogu oggolaanayo dadka safraya ee la tallaalay inay ku galaan Mareykanka natiijadii tijaabada COVID-19 ee diidmada ahayd kahor safrkii horraantii Nofembar waxaa soo dhoweeyay IATA.
Maamulka Biden wuxuu u saamaxayaa socdaalayaasha la tallaalay inay ku galaan Mareykanka iyagoo wata natiijo tijaabo ah oo COVID-19 ka hor safarka kahor horraantii Noofembar.
U oggolaanshaha gelitaanka Mareykanka ee kuwa la tallaalay waxay u furi doontaa safarka Mareykanka dad badan oo xirnaa 18 -kii bilood ee la soo dhaafay.
Ku dhawaaqitaankani wuxuu calaamad u yahay isbeddel muhiim ah oo lagu maareeyo khataraha COVID-19 laga bilaabo tixgelinta bustayaasha ee heer qaran ilaa qiimeynta halista shaqsiyeed.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu soo dhoweeyay go'aanka Maamulka Biden si loogu oggolaado socdaalayaasha la tallaalay inay ku galaan Mareykanka natiijo tijaabo COVID-19 ah oo xun ka hor safarka kahor horraantii Nofembar.
Muhiimad ahaan, tani waxay ka sarreysaa waxa loogu yeero xannibaadaha 212f oo u diiday qof inuu soo galo Mareykanka haddii ay joogi lahaayeen 33 dal oo gaar ah oo ay ku jiraan UK, Ireland, dhammaan dalalka Schengen, Brazil, South Africa, India, iyo China 14-kii maalmood ee la soo dhaafay.
“Ku dhawaaqidda maanta waa tallaabo weyn oo horay loo qaaday. Oggolaanshaha gelitaanka Mareykanka ee kuwa la tallaalay ayaa furan safarka Mareykanka dad badan oo xirnaa 18 -kii bilood ee la soo dhaafay. Kani waa war aad u fiican qoysaska iyo dadka la jecel yahay ee ku dhibtooday wadne xanuunka iyo kalinimada kala tagga. Waxay u fiican tahay malaayiinta habnololeed ee Mareykanka ee ku tiirsan dalxiiska caalamiga ah. Waxayna kor u qaadeysaa soo kabashada dhaqaalaha iyada oo awood u siinaysa qaar ka mid ah suuqyada safarka ganacsiga ee muhiimka ah, ”ayuu yiri Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud.
“Ku dhawaaqitaankani wuxuu calaamad u yahay isbeddel muhiim ah oo lagu maareeyo khataraha COVID-19 laga bilaabo tixgelinta bustayaasha ee heer qaran ilaa qiimeynta halista shaqsiyeed. Caqabadda xigta waa helidda nidaam lagu maareeyo khataraha socotada aan helin tallaalka. Xogtu waxay tilmaamaysaa in imtixaanku yahay xalka. Laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in dowladuhu ay dardar geliyaan tallaalka caalamiga ah oo ay oggolaadaan qaab caalami ah oo loogu talagalay safarka halkaas oo ilaha tijaabintu ay diiradda saarayaan socdaalayaasha aan la tallaalin. Waa inaan dib ugu laabannaa xaalad ay xorriyadda safarka u tahay qof walba, ”ayuu yiri Walsh.